Dowlado la sheegay in ay ku xad gudbeen cunaqabateynta hubka ee saaran dalka Liibiya… – Hagaag.com
Dowlado la sheegay in ay ku xad gudbeen cunaqabateynta hubka ee saaran dalka Liibiya…
Posted on 10 Nofeembar 2019 by Admin in World // 0 Comments
Dowladaha Imaaraadka, Turkiga, Sudan, iyo Jordan ayaa lagu eedeeyay in ay ku xadgudbeen cunaqabateynta hubka ee saaran wadanka colaadaha ay ka jiraan ee Liibiya,sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday Qaramada Midoobay.
Guddiga dhanka cunaqabateynta Liibiya u qaabilsan Qaramada Midoobay ayaa tilmaamay in taliyeka tirsan ciidanka Sudaan Jenaral Mohamed Hamdan Dagalo, uu jabiyay qaraarka dhanka hubka isaga oo ciidamo gaaraya 1,000 askari u diray bariga Liibiya bishii July ee Sanadkaan.
Ciidankan ayaa waxay loogu talagalay in ay garab siiyaan Jenaral Khaliifa Haftar si loogu weeraro magaalada caasimada ah ee Tripoli.
Ilo xog ogaal ah ayaa laga soo xigtay in ciidankan ay fariisin ka dhigteen deegaanka al-Jufra ee bariga Liibiya.
Dhanka kale warbixinta Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in xukuumada Imaaraadka ay jabisay cunqabateynta saaran Liibiya iyagoo gantaalaha difaaca ku taageeray ciidanka Jenaral Khaliifa Haftar ee ku sugan magaalada Gharyan.
Wadamada Turkiga, Jordan iyo Imaaraadka ayaa dhanka kale si wadajir hub ugu taageeray dhinacyada ku loolamaya Liibiya sida ay xaqiijiyeen xeeldharayaasha hubka ee Qaramada Midoobay.
Xukuumada Ankara ayaa si cad gantaalaha difaaca iyo qalab kale oo milatari sida gaadiidka dagaalka ugu taageertay dowlada caalamka aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay caasimada Liibiya.